Ndị otu - Okwu Foundation • Bụrụ onye otu
Ọtụtụ ndị mmadụ na -abụ ndị otu Okwu Foundation n'ihi ịhụnanya ha nwere n'akwụkwọ Percival, mmetụta miri emi ọrụ Percival nwere na ndụ ha na ọchịchọ ịkwado anyị n'inweta ndị na -agụ akwụkwọ sara mbara karị. N'adịghị ka ụfọdụ ọgbakọ ndị ọzọ, anyị enweghị guru, onye nkuzi ma ọ bụ onye isi oche. Ebumnuche na ntinye anyị bụ ime ka ndị mmadụ mara ọmarịcha ọmarịcha Percival, Echiche na Mbibi, tinyekwara akwụkwọ ya ndị ọzọ. Anyị dị njikere inye ụfọdụ ntụzịaka, ma ọ bụrụ na a rịọ ya, mana anyị bụkwa ndị na-akwado amamihe nke ịchị onwe anyị-mụta ịtụkwasị obi na itinye ikike nke aka nke onwe anyị. Akwụkwọ Percival nwere ike ịbụ ihe nduzi iji nyere aka na usoro a.
Ndị niile so na Okwu Foundation, n'agbanyeghị ụdị ọkwa ị na-ahọrọ, ga-enweta magazin anyị nke ọ bụla, Okwu (Ihe ngosi nlele). Ndị otu na -enwetakwa mbelata 40% na akwụkwọ Percival.
Okwu Foundation na-akwado ịmụ akwụkwọ nke Percival. Site na magazin anyị kwa ọnwa, Okwu ahụ, anyị mepụtara ohere iji gwa ndị na-agụ akwụkwọ anyị ụzọ dị iche iche eji amụ ihe. Mgbe mmadụ ghọrọ onye otu na Foundation Foundation, ozi a dị site na magazin anyị:
• Ndepụta nke ndị òtù anyị nwere mmasị ịmụ ihe na ndị ọzọ.
• Enyemaka site na Okwu Foundation maka ndị chọrọ ịga ma ọ bụ hazie ìgwè ọmụmụ ihe na mpaghara ha.
Otu ndụ n'ụwa bụ akụkụ nke usoro, dị ka otu paragraf n'akwụkwọ, dị ka otu nzọụkwụ na-emegharị ma ọ bụ dị ka otu ụbọchị na ndụ. Echiche nke ohere na nke otu ndụ n'elu ụwa bụ abụọ n'ime njehie ndị dị ịrịba ama nke ụmụ mmadụ. HW Percival